Cooking – Daily Feed MM
Editor_Sat | March 30, 2022
အရမ်းရိုးရှင်းပြီး ပိုက်ဆံလဲအများကြီးမကုန်ဘဲကူဖီလ်းမလိုင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။ သင်္ကြန်ပိတ်ရမှာ လုပ်စားကြည့်ပေါ့။ လိုအပ်တာတွေကတော့ပေါင်မုန့် နို့ဆီ နဲ့ နို့စိမ်းဘူးလေးတွေ ပါပဲနော် ပြုလုပ်ပုံနည်းလေးကတော့
ရာသီဉတု ပူတော့ စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည်လုပ်ပြီး စားကြမယ် ပါဝင်ပစ္စည်း စတော်ဘယ်ရီ ၁ ဘူး နွားနို့ စစ်စစ် ၁ ဖန်ခွက် ရေ ကော်ဖီခွက် ၁ ခွက် ဆား သကြား အနည်းငယ် ပြုလုပ်ပုံ နွားနို့ကိုဆူအောင်ကျို ထားပါ ။ စတော်ဘယ်ရီ ကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ
Editor_Sat | March 28, 2022
စွယ်တော်ရွက်ကို ဟင်းချိုချက်မယ်၊ ဘာတွေ အစွမ်းထက်သလဲ စွယ်တော်ရွက်အနုလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်ဆို အရွက်နုလေးတွေ ခူးပြီး ဟင်းချိုချက်သောက်ကြပါတယ်။ စွယ်တော်ရွက်က ဟင်းချိုလည်းချက်သောက်လို့ရသလို အရွက်ကိုရေနွေးဖျော်ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆီစိမ်းလေးနဲ့သုပ်စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်း ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းထားပါ။ စားနိုင်သလောက်ရေပမာဏထည့်ပြီး ဆူပွက်လာသည်အထိတည်ပါ။ မျှင်ငပိအနည်းငယ်နှင့် အပေါ်မှ ထောင်းထားတာများကို ထည့်ပါ။ ဟင်းအိုးဆူလာရင် ချွေထားသော စွယ်တော်ရွက်များကို ထည့်ပါ။ အရသာမှုန့် ခတ်ပါ။
Editor_Sat | March 25, 2022
သန့်ရှင်းလတ်ဆပ်တဲ့ အိမ်တွင်း တို့ဟူးသုပ် တို့ဟူးကြိုနည်း လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်စားလို့ရပီနော် နိုင်လွန်ပဲမှုန့်ဘဲ အသုံးများပါတယ်။ ပဲမှုန့် ၁ ခွက် ရေ ၁ ခွက်ခွဲ အချိုးပါ။ -ရေထည့် ပဲမှုန့်ထည့် နနွင်းမှုန့် နည်းနည်း ဆားနည်းနည်း ထည့်ပါ။ အားလုံးသမသွားတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ -ပဲမှုန့်ကျေသွားရင် တခါ ဇကာနဲ့စစ်ချပေးပါ။ ဆီချက်အရင်ချက်မယ်။ -ဒယ်အိုးထဲ ဆီ
Editor_Sat | March 21, 2022
ချက်ပြီးသား ဟင်းတွေကို ပြန်နွှေးပြီး မစားသင့်သည့် ဟင်းလျာများ ၁-ဟင်းနု နွယ်ရွက် (Spinach) ချက်ပြီးသားဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို ပြန်နွှေးပြီး မစားသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထဲမှာပါတဲ့ နိုက်ထရိတ်(nitrates) ဓာတ်ဆားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ထားတဲ့ဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို နွှေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နိုက်ထရိတ် ဓာတ်ဆားကနေ နိုက်ထရစ် အက်စစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး အဲ့ဒီ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုက်ထရစ်
ဈေးသွားတိုင်းစိတ်ညစ်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မတို့အတွက် ၅၉ ရက်စာ ဟင်းအတွဲ
Admin_John | January 29, 2022
ဈေးသွားရင်ဘာချက်ရမလဲတွေးရတာ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်….၅၉ ရက်စာ ❤️❤️လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းအတွက်အစပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အိမ်ရှင်မများ ကျေနပ်ကြပါစေ။ ၁. ကြက်သားအာလူးဟင်း+ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် ၂. ငါးမွှေ+ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ငရုပ်ပွကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် ၃.ငါးဖယ်ငါးဆုတ်+ကျောက်ဖရုံသီးချဉ်ရည်+ရုံးပတီသီးကြော်+ငါးပိထောင်း ၄.ပုစွန် ဆီပြန်+ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည် +ပန်းဂေါ်ဖီကြက်ဥ+ငရုပ်သီးဆားထောင်း ၅. ဘဲဥဆီပြန်+ပဲရွက်ဟင်းချို+ကင်းပုံသီးချက်+ငံပြာရည်ချက်+တို့စရာ ၆. ပုစွန်ဘော့ချိတ်+ ဂေါ်ရခါးသီးအချိုချက်+မြင်းခွာရွက်သုတ်+ငါးပိချက် ၇.၀က်သနီချက်+ဘူးသီးချည်ရည်+ရွှေပဲသီးဥနီ+ဘာလချောင်ကြော် ၈. ကကတစ်
Admin_John | November 17, 2021
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ည၁၂နာရီရောက်တာနဲ့ ဆေးပေါင်းခတယ်ဆိုပြီး မယ်ဇလီဖူးကိုသုပ်စားကြပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာလေးတော့ မမေ့ကြပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်သွေးတိုးရှိ တဲ့သူတွေ ဆေးဝင်တယ်ဆိုပြီး မယ်ဇလီဖူးသုပ်ကို အဝအပြဲသွားမစားမိပါစေနဲ့။ သွေးတက်ပြီး ခေါင်းတွေထိုးဇက်တွေ လေးလံလာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ဝမ်းချူပ်နေရင် ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်မှာ။ လေဖြတ်မှာပါကြောက်ရပါတယ်။ နောက်မယ်ဇလီဖူးသုပ်ကို အရက်နဲ့မြည်းကြပါတယ်။ အတော်အန္တရယ်များတဲ့ ကိစ္စပါ။ မယ်ဇလီဖူးဟာ အခါးလေကို ကောင်းစေပါတယ်။ အရက်ကလည်းအခါး ဒါပေမယ့် အရက်က ပူခါး
Admin_John | November 10, 2021
အရသာရှိရှိ မြန်မာမုန့်ဟင်းခါး ချက်စားကြမယ်။ အိမ်မှာ ဟင်းတွေချည်းစားနေရလို့ ငြီးငွေ့နေပြီလား။ အပြင်ကမုန့်ဟင်းခါးတွေကိုလည်း အကြိုက်မတွေ့လို့ အပြောင်းအလဲလေးလုပ်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ချိုမြလှတဲ့အရသာနဲ့ Mom’s Choice ရဲ့ အရိုးလွတ် အရေပြားလွတ်ငါးအသားလွှာနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေးချက်စားကြမယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူ ချက်လို့ရတယ်ဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့… • ငါးဒန်ငါးအသားလွှာ – 1 kg • ကြက်သွန်နီ